ဆီးချိုရှိသူတွေ ဖောလစ်အက်ဆစ် သောက်တဲ့အခါ - Hello Sayarwon
ဆီးချို တစ်နေ့တစ်ခြား ဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်လာပါတယ်။ ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) က လူ ၁၀၀ မှာ ၅၀ နဲ့အထက် ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာပါ။ ဆီးချိုက ဖြစ်ပြီဆိုရင် သူ တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူနဲ့အတူ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကိုလည်း ယူဆောင်လာတတ်ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဆီးချိုကို ခံစားရပြီး နှစ်အတော်ကြာလာတဲ့အခါ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ၊ သွေးတိုးရောဂါတွေကို ခံစားလာရတာပါ။ တစ်ခါတလေမှာ သွေးတိုးကြောင့် ဆီးချို နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် B9 (ဖောလစ်အက်ဆစ်) ကဆီးချိုရှိသူတွေမှာ ဘယ်လို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်ဆစ် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဘာလုပ်ပေးလဲ …….
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ကလေးငယ်တွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ သန္ဓေသား ကောင်းမွန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတွေ ကျန်းမာစေဖို့ သောက်ကြတဲ့ ဗီတာမင် အနေနဲ့ သိကြတာ များပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ဖောလစ်အက်ဆစ်က အရေပြား ပြဿနာတွေကို ကင်းစေနိုင်သလို ဆဲလ်အသစ်​တွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့လည်း ထောက်ကူပေးပါတယ်။
ဒါတွေအပြင် ဖောလစ်အက်ဆစ်က ဆီးချိုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေ မခံစားရစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုရှိသူတွေ ဖောလစ်အက်ဆစ် သောက်တဲ့အခါ homocysteine levels ကို သိသိသာသာ ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး သွေးကြောတွေကို ကျန်းမာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ခံစားရနိုင်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ ခံစားရနိုင်ခြေကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာက ဆီးချို ရောဂါ ခံစားနေရသူတွေကို အသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်း တစ်ခုပါ။
ဖောလစ်အက်ဆစ် ပုံမှန်သောက်သုံးပေးတာက ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးတွေကို ကျန်းမာစေပြီး ခြေထောက်မှာ အနာဖြစ်တာတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အရေပြား ပြဿနာ ကင်းစေပြီး အနာကျက်စေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆီးချိုကြောင့် အာရုံကြောငယ်လေးတွေ ပျက်စီးတာမျိုးကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးချိုကြောင့် သိမြင်မှုစွမ်းရည် ကျဆင်းလာပြီး သတိမေ့တတ်တာ၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ကျဆင်းတတ်တာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဆီးချို ကြောင့် နှလုံး ထိခိုက်တာ၊ နှလုံးရောဂါတွေ မဖြစ်စေဖို့လည်း ဖောလစ်အက်ဆစ်က ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးနိုင်သလို ဆီးချိုသမားတွေမှာ ခံစားရနိုင်တဲ့ အစာခြေစနစ် ပြဿနာတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံကိုလည်း ကျန်းမာစေပြီး အမြင်အာရုံ ပြဿနာတွေကနေလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောကို ကျဆင်းစေနိုင်သလို လေဖြတ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ဆေးသောက်မှ ရမှာလား ………
ဖောလစ်အက်ဆစ်ကို ဆေးသောက်မှရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေကနေလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပင်လယ်စာ စတာတွေကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ကဲ …… ဆီးချို က အတူခေါ်လာတတ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖောလစ်အက်ဆစ် ကြွယ်ဝအောင် စားသုံးရင်း ကာကွယ်လိုက်ပါ။
Folic acid ‘may benefit diabetics’ https://www.news-medical.net/news/20120702/Folic-acid-may-benefit-diabetics.aspx Accessed Date7December 2021
Is Folic Acid Beneficial for Diabetes? https://www.thediabetescouncil.com/is-folic-acid-beneficial-for-diabetes/ Accessed Date7December 2021
ဆီးချိုရောဂါရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ အစုံစုံ